Monday, May 28, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini handina kukwanisa kubatsira asi kuseka pandakaedza kutarisa iyo .NET Blogging Injini ichangoburitswa:
I work in a .NET shop, so I'm sure the developers will give me a hard time about this tomorrow. I think I'll be sticking to WordPress uye PHP / MySQL kwenguva yakati rebei!
May 29, 2007 pa 8: 12 AM
Zvichiri pasi kuti zvigadziriswe.
Kwete chaiyo kuvhurwa kukuru!
May 29, 2007 pa 10: 40 AM
Izvi zvinosetsa kwazvo. Kutenda nekugovana.
May 30, 2007 pa 10: 00 AM
Zvinoshamisa kwazvo, ndinoziva. Netsaona ndakadzima mamwe mafaera kubva pawebhu server - mafaera andisina ini. Yakanga ichinyanyisa uye yaifanirwa kushomeka zvishoma, kunyanya nekuti pepanhau reDanish rakangoburitsa chinyorwa nezvazvo zuva rimwe chetero. Doh!